Ngaba i-IPC iluchaphazela njani utyalo-mali? | Ezezimali
Ngaba i-IPC iluchaphazela njani utyalo-mali?
Ukunyuka kwamaxabiso yinkqubo yezoqoqosho ebangelwa kukungalingani okukhoyo phakathi kwemveliso kunye nemfuno; kubangela ukunyuka okuqhubekayo kumaxabiso eemveliso ezininzi kunye neenkonzo, kunye a ukulahleka kwexabiso lemali ukubanakho ukuzifumana okanye ukuzisebenzisa. Ngokwayo ayinanto yakwenza nokuvela kweemarike zezabelo. Kodwa endaweni yoko, ngemigaqo-nkqubo ephuhliswayo esekwe kolu tshintsho lubalulekileyo lwezoqoqosho. Ukuya kwinqanaba lokuba ngamaxesha athile kunokwenza ukuba imarike yemasheya inyuke okanye yehle.
Ngokomgaqo, a Ixabiso eliphantsi linceda iinkampani ezidwelisiweyo yenza ngcono kwiimarike zezabelo. Le nyaniso ibangelwe kukuchaphazeleka kwayo ekuqeshweni kwabasebenzi, uphononongo lwemivuzo kwanakwinkxaso-mali abayifumanayo yokuqhuba ishishini labo. Konke oku kuguqulela kwimeko efanelekileyo ngakumbi ukuba iinkampani zikhule. Kwaye ke, ithiyori, kufuneka idluliselwe kuqikelelo lwayo kwiimarike ze-equity. Kodwa ngendlela ye-sibylline engaphezulu kwezinye iiparameter zoqoqosho.
Ngelixa kwelinye icala, ngekhe silibale ngeli xesha ukuba ukurhweba ngamasheya kwamanye amazwe baziphethe kakuhle kumaxesha apho ukunyuka kwamaxabiso bekuqulethwe okanye ubuncinci kunesiqhelo. Ngokuhlaziywa okuye kwafikelela kumanqanaba abaluleke kakhulu kuzo zonke iimarike zamanye amazwe. Eli licandelo ekufuneka ulithathele ingqalelo ukusukela ngoku ukuya phambili xa uza kuvula izikhundla nakweyiphi na indices zehlabathi. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
1 CPI ephezulu
2 Ungazenza njani kwezi meko?
3 I-CPI ngalo mzuzu
4 Ukunyuka kwamaxabiso
5 Ukwanda kokuzonwabisa kunye nokutya
6 AmaXabiso amaXabiso amaXabiso
Kwelinye icala, i-CPI ephezulu inokudala ukungavisisani okufanelekileyo kwilizwe okanye kwindawo yezoqoqosho. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba enye yeemarike ezichaphazelekileyo zezemali, ezinomnqamlezo onokuguquguquka okukhulu kwezemali. Ngokukodwa ezo zibhekisa kwidola yaseMelika kunye ne-euro. Ngale nto kuthetha ukuyila umgaqo-nkqubo woqoqosho ngoorhulumente kwihlabathi liphela. Ngokwenyani oku kuthetha ukuba i-CPI ephezulu ayilunganga kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Iimarike zamasheya zihlala zingaqhubi kakuhle kolu xabiso okanye imeko enexabiso eliphezulu
Ngelixa kwelinye icala, kufanele ukuba kuthathelwe ingqalelo ukuba inokuphela ichaphazela umvuzo wabasebenzi. Ngale ndlela, ekugqibeleni idluliselwe kwisiphumo seenkampani ezidwelisiweyo ezinokuphulukana noxabiso lwazo kwiimarike zezabelo. Nangona kungenjalo ngendlela ebonakalayo njengakwezinye iiparameter ezibalulekileyo zoqoqosho nezemali. Umzekelo, i-GDP, idatha yentswela-ngqesho kunye nokusilela kushishino okanye kurhulumente. Intoni ezikhuthazayo kwindaleko yentengiso yesitokhwe, njengoko ubonile kule minyaka idlulileyo.
Eli licandelo ekufuneka ulithathele ingqalelo ukusukela ngoku ukuya phambili xa uza kuvula izikhundla kuyo nayiphi na indices yesitokhwe emhlabeni. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Ungazenza njani kwezi meko?
Ewe, akukho lula kakhulu ukusebenza kwii-equity ngokusekwe kwidatha ye-IPC. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kunzima ukwenza olu hlobo lwesenzo. Apho kufuneka zikhatshwe lolunye ulwazi lwezoqoqosho ngokubaluleka okuthile ukuze ukwazi ukuthatha isigqibo kutyalo-mali lwakho, ngandlela ithile okanye enye. Kuba, eneneni, ukunyuka kwamaxabiso kwixesha elifutshane ngokuqinisekileyo akudweliswanga kwimarike yemasheya ubuncinci kwinqanaba labatyali zimali abancinci nabaphakathi. Ngale ndlela, kuluncedo kakhulu ukwenza isicwangciso sotyalo-mali ukuba ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuyehla unako kuveza imali eninzi kurhwebo lwesitokhwe. Ngelixa inyukayo inokudala iingxaki ngakumbi kwii-indices zesitokhwe zehlabathi liphela.
Enye into ebaluleke ngokukodwa ngokubhekisele kwixabiso lentengo kukuba inokunxulunyaniswa nezinye izinto ezidweliswe ziinkampani ezihlanganisiweyo kwiimarike zezabelo. Ukuya kwinqanaba elithule kakhulu Amaxabiso abo anokutshintsha-tshintsha ngendlela enye okanye enye. Apho kuqheleke kakhulu ukuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi ngokwabo abayazi le meko kwimeko yeshishini. Le yinto ehlala ihleli kwicandelo leemarike zezemali.
Ngelixa kwelinye icala, ukunyuka kwamaxabiso kunokuthiwa ayinampembelelo kangako ekuphuhliseni iphothifoliyo yotyalo-mali kule minyaka imbalwa izayo. Kodwa umzekelo, yinto yokuba okwangoku ayinanto yakwenza nokwaphuka kwenkxaso yamanqaku ayi-9.000 kwisalathiso semilinganiselo yee-equity zaseSpain kwaye oko kukhokelele kuzo zonke ii-alamu kwi-Ibex 35. Ukuza kuthi ga ngoku ayinakugxininiswa ukuba kwiinyanga ezizayo inokuya kumanqanaba asondele kakhulu kumanqaku angama-8.300.
I-CPI ngalo mzuzu
Ukubuyela kwakhona kwi-CPI ngokubanzi Izinga lonyaka le-Index yamaxabiso abaThengi ngokubanzi (CPI) ngoJuni yi-0,4%, ishumi leshumi elisezantsi kunelo lalibhalisiwe kwinyanga ephelileyo, ngokweenkcukacha zamva nje ezinikezwe liZiko lezeNkcukacha-manani leSizwe (INE). Apho kuboniswa khona ukuba amaqela anefuthe elikhulu ekwehleni kwenqanaba lonyaka ngala: ezoThutho, zona izisa umahluko wonyaka we-0,0%, phantse amanqaku amabini asezantsi kunenyanga ephelileyo. Oku kungenxa yokwehla kwamaxabiso ezinto zokubasa kunye nezokuthambisa kule nyanga, xa kuthelekiswa nokwanda okubhaliswe ngoJuni 2018.
Enye yindawo yokuhlala, iqondo layo lehle ngaphezulu kwenqaku elinye, limi kwi -1,5%, ngenxa yoku ukuhla kwamaxabiso ombane kunye nezibaso ezingamanzi, ezonyuke ngo-2018. Elona candelo, liqela elibonakala ukuba libe nempembelelo entle kwizinga lonyaka: Ukuzonwabisa kunye nenkcubeko, ebeka ireyithi yayo kwi -0,4%, ezisibhozo kwishumi ngaphezulu kwekaCanzibe, ngenxa yoko yokunyuka kwamaxabiso eephakeji zabakhenkethi, ngaphezulu kune-2018.
Ngelixa kwelinye icala, inqanaba lokwahluka kwexabiso lentengo (isalathiso ngokubanzi kungafakwanga ukutya okungasetyenziswanga kunye neemveliso zamandla) lonyuse isibini kwishumi, saya kwi-0,9%, esisihlanu seshumi ngaphezulu kwese-CPI ngokubanzi. Izinga lonyaka lokunyuka kwamaxabiso yayingekho ngaphezulu kwe-CPI ngokubanzi ukusukela ngeyoMqungu ngo-2018. Kwelinye icala, amaqela anefuthe elibi kwirhafu yenyanga ye-CPI zezi: ezothutho, ezo umahluko wazo -1,4% unefuthe -0,222, ngenxa yokwehla kwamaxabiso epetroli.
Impahla nezihlangu, ngezinga le -1,3%, elibonisa indlela yokuziphatha kwamaxabiso ekuqaleni kwexesha lokuthengisa entwasahlobo nasehlotyeni. Iziphumo zeli qela kwi-CPI ngokubanzi zi -0,083. Ezezindlu, ezibeka umahluko wazo -0,6% kwaye zinefuthe eliyi -0,080, njengesiphumo sokwehla kwamaxabiso ombane, ukuya kuthi ga kwinqanaba elincinci, igesi.
Ukwanda kokuzonwabisa kunye nokutya
Ngokwenxalenye yawo, amaqela aneyona mpembelelo intle inkulu kwisalathiso ngokubanzi yile: ukwanda kwamaxabiso eephakeji zokhenketho. Ukutya kunye neziselo ezinxilisayo, ezibonisa ireyithi ye-0,4% kunye nefuthe le-0,074, ekhuthazwa kukonyuka kwamaxabiso eziqhamo kwaye, ukuya kuthi ga kwinqanaba elincinci, inyama. Kukwafanelekile ukuba uqaphele, nangona kwelinye icala, ukuhla kumaxabiso eentlanzi kunye neentlanzi, iimbotyi kunye nemifuno kunye neoyile kunye namafutha.
Ireyithi yonyaka ye-CPI yehle kulo lonke uluntu oluzimeleyo ngoJuni xa kuthelekiswa noMeyi. Ukuncipha okukhulu kwenzeka eCantabria naseCastilla y León, ngamathontsi ezintandathu kwishumi. Ngokwabo, iiCanary Islands kunye neLizwe laseBasque ziiLuntu eziZimeleyo ezinenqanaba lonyaka elibhalise ukwehla okuncinci, kwesibini kwishumi xa kuthelekiswa nenyanga ephelileyo. Ngelixa kwelinye icala, kunyanzelekile ukuba kugxininiswe ukuba inqanaba lokwahluka kwe-HICP limi kwi-0,6%, isithathu kwishumi ngaphantsi kokubhaliswa kwinyanga ephelileyo. Ngelixa kwelinye icala, umahluko wenyanga we-HICP yi -0,1%.
AmaXabiso amaXabiso amaXabiso
Kwixesha elihlalutywe liZiko leSizwe leeNkcukacha-manani (i-INE) kutyhilwa ukuba inqanaba lokwahluka kwe-CPI ngonyaka kwiRhafu eziQhelekileyo (CPI-IC) limi kwi-0,4%, ngokufanayo nelo libhaliswe yi-CPI jikelele. Ixabiso lokwahluka kwenyanga le-CPI-IC ngama -0,1%. Ngokwenxalenye yayo, i-HICP kwiRhafu eQhelekileyo (i-IPCA-IC) inika ireyithi yonyaka ye-0,6%, efanayo naleyo ye-HICP. Ngelixa okokugqibela, inqanaba lokwahluka kweenyanga kwi-HICP-IC yi -0,1%, ngokwedatha ebonelelwe yi-INE.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ngaba i-IPC iluchaphazela njani utyalo-mali?